OpenID arụnyere na na njikere! | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 25, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ịnụbeghị Meghee, ọ bụ ihe na-akpali nkà na ụzụ ọhụrụ na weebụ. Nyere weebụsaịtị na logins / okwuntughe dị iche iche mmadụ kwesịrị icheta ụbọchị ndị a, teknụzụ a nwere ike ịbụ ngọzi ma ọ bụ ọbụbụ ọnụ.
Na akụkụ mara mma bụ eziokwu ahụ na ị na-echekwa nbanye zoro ezo na paswọọdụ gị na sava gị na oge ọ bụla ị nbanye ebe ọ bụla, ọ na-egosipụtakwa na sava gị. N'akụkụ na-adịghị mma bụ ihe a maara dị ka 'otu isi nke ọdịda'. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike nyochaa site na iji nbanye na paswọọdụ gị, ha nwere ike ịnweta usoro ọ bụla ị nwere ike ịnweta site na OpenID.
Nke a bụ obere okwu na OpenID:
Ka m na-amụtakwu banyere OpenID, enwere m nchekwube. Na mbu, echere m n'ezie, mana ebe m ahazi ya ma hụ otu esi eji ya, echere m na ọ bụ nnukwu teknụzụ. AOL, Microsoft na NkebiApart bụ ụfọdụ n'ime ndị folks kachasị ọhụrụ iji kwado OpenID, ọ dị ka ọ na-enwu ọkụ.
Otu n'ime ihe ukwu banyere OpenID bụ na ịnwere ike ịnabata ya na sava gị. Edebela m phpMyID n'abalị a na nkeji ole na ole ọ nwalere ma rụọ ọrụ dị ukwuu. Ahọrọ m nhọrọ kachasị mfe maka nhazi Onye ọrụ otu m kwesịrị ịme ihe ole na ole:
Mee ndekọ ọhụrụ na sava m ma wụnye faịlụ ndị ahụ. M họọrọ / OpenID /
M gbakwunyere redirecters na WordPress m nkụnye eji isi mee faịlụ na-ibugharị ọ bụla OpenID arịrịọ
Ekwesịrị m ịhazi paswọọdụ m site na ibanye nbanye m, mpaghara (nke a bụ phpMyID), na okwuntughe. Iji mee nke a, m popped a PHP faịlụ elu na ihe nkesa na-eso koodu:
M depụtaghachiri eriri ezoro ezo n'ime nhazi maka faịlụ ID na m na-arụ ọrụ ma na-agba ọsọ!
Iji nwalee, naanị m ịbanye site na iji URL dị mfe
M wee pụọ
Nke ahụ bụ ya! Adreesị OpenID m dị ugbu a http://martech.zone ọ ga-enyocha nbanye na Paswọdu m họọrọ.
Otu ihe ọzọ mara mma nke ndị mmadụ na-ekwughị banyere ya bụ ojiji nke ozi ndabere na ngwa ndị nwere ike ịnweta. Nwere ike ịme aha gị, ụbọchị ọmụmụ gị, oge mpaghara, okike na ozi ndị ọzọ dị maka ojiji. Enwere m echiche ahụ n'anya! Obere ụdị iji dejupụta.
Enwere ọtụtụ akụkọ na blogosphere na OpenID, m ga-adụ gị ọdụ ka ị gụọ karịa tupu ị kpebie mkpebi gị:
Iji OpenID Mgbakọ - Phil Windley
A blurb na Technorati si WTF
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọ bụla, OpenID bụ atụmatụ nyocha dị mfe nke, ọ bụrụ na ejiri ya, kwesịrị ime ka nyocha dị mfe na ọtụtụ webụsaịtị. Echere m na ọ ga-agbawa n'ezie ọ bụ ezie na agaghị m enweta ya na akaụntụ akụ m n'oge ọ bụla (ma ọ bụ na agaghị m achọ). Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrịgo na OpenID bandwagon, a ga m eme ya ọsọ ọsọ ka ị nwee ike nweta ụfọdụ n'ime mbido mbụ na-eso ya.
Tags: emeghebanyeotu akara
Feb 25, 2007 na 12:28 PM
M nwalere taa Magnolia. Magnolia na-arụ ọrụ na ọbụnakwa na akaụntụ m na OpenID - dị jụụ. Agbanyeghị, ma ha edegharịghị arịrịọ m na faịlụ isi m ma ọ bụ redirect anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ekwesịrị m itinye URL ahụ kpọmkwem n'ime ngalaba OpenID iji mee ka ọ rụọ ọrụ.
Feb 26, 2007 na 7:15 PM
Doh! Gbaa mbọ hụ na
OpenID maka ndị na-abụghị SuperUsers
Ndepụta nzipu ozi OpenID
Feb 25, 2007 na 9:28 PM
Looked lelee iji wp ngwa mgbakwunye maka openid?
Dịka m na-ahụ na ndị ọrụ gị n'oge a, ekwesighi inwe oghere ikwu okwu.
Nke ahụ ọ bụ eziokwu?
Feb 25, 2007 na 11:24 PM
Alpesh, ọ bụ ya OpenID nyefere WordPress ngwa mgbakwunye?
Feb 25, 2007 na 11:28 PM
Ihe mgbakwunye ọzọ. M na-ezo aka na OpenID site Verselogic.
Kedu nke ga-aka mma? 🙂
Feb 25, 2007 na 11:33 PM
O doghi m anya! Ikekwe ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ ndị ọzọ nwere ike isonye na mkparịta ụka ahụ. O doro anya na ha abụọ nwere ike… OpenID n'ezie bụ teknụzụ dị mfe nke nwere ike ịmegharị ngwa ngwa na ngwa mgbakwunye. Daalụ maka mgbakwunye!
Feb 25, 2007 na 11:36 PM
Enweghị nchekasị. Ee, ọ ga-amasị gị ịgụ ihe ndị ọzọ nwere ikwu. You na-eme atụmatụ ime uche gị 'oghe id' ed 😉
Feb 25, 2007 na 11:56 PM
Echeghị m otú ahụ. Ahụla m ebe ntinye ọ bụla na-ekwu na-ebute obere okwu. Nkwupụta bụ ihe dị mkpa nke blog na-eduga n'ịbawanye Nchọgharị Nchọgharị n'ihi na peeji ahụ gbanwere ma gbanwee. N'ezie, ọ bụ ihe dị iche, ana m agba ndị ọzọ ume ikwu okwu site n'iji ya eme ihe Enweghị Nofollow.
Achọghị m ime ihe ọ bụla iji gbochie onye ọ bụla ikwu okwu. Ọ bụrụ na OpenID na-aga na ndị mmadụ na-abanye na-abanye na-aza ajụjụ, ọ nwere ike ịgbanwe uche m.
Feb 25, 2007 na 11:59 PM
Enweghị aghụghọ ọ bụla.
Feb 26, 2007 na 4:04 PM
Doug, ngwa mgbakwunye amaokwu ahụ achọghị OpenID maka ịza ajụjụ, ọ na-agbakwunye ya dịka nhọrọ. Ọbịa ka nwere ike ịza aha / email / url combo ka ọ dị na mbụ. Amalitere m iji ya na saịtị m ọ bụghị kwa ogologo oge gara aga.
Feb 26, 2007 na 5:56 PM
Nke ahụ mara ezigbo mma! Enwere m ike ịnwale ya na ngwa mgbakwunye m nwere maka nkọwa ndị isi.
Feb 26, 2007 na 9:33 PM
I mere nke ọma. Emeela m otu ihe ahụ. 🙂 Ka anyị hụ otú o si arụ ọrụ na ndị na-agụ ya.
Agara m ebe a ime ihe yiri nke a. M arụnyere na ezi na ihe niile. M tinyere ahịrị abụọ ahụ na isiokwu WordPress m:
Nbanye nbanye arụ ọrụ nke ọma.
Nwalee WikiTravel, banyere ahazi aha m OpenID aha njirimara (alhome.net) ọ tụgharịrị m gaa na saịtị nke m dịka a ga - asị na ọ nweghị ihe mere.
Ọ na-efu ihe?
Oops ahịrị ndị ahụ abịaghị na nkọwa gara aga. Ma ha bụ otu ihe ahụ dị ka nke gị na ngalaba aha ya.
Nwere ike tinye koodu na a ikwu na tags around your code. I'll try out Wikitravel and see! It could be that they are not honoring the redirect. It's good that it came back to your site, but it should redirect to your OpenID page. tags around your code. I'll try out Wikitravel and see! It could be that they are not honoring the redirect. It's good that it came back to your site, but it should redirect to your OpenID page.